धेरै, को पाठ्यक्रम, के रातो हट थाहा छ। केक को गन्ध परिवारमा समुन्नतिको होस्टहरूको र पाहुनाको सत्कार गर्ने स्त्री को राम्रो हात को घर र आतिथ्य मा दुनिया संकेत गर्छ। र सिपालु Mistress महिमा बारे के, जो कसरी घरेलू र पाइ वा Kurnik, परिचारक वा केक को सबै किसिमका आगंतुकों खुसी पार्न Pies लागि खमीर आटा तयार, र त्यसपछि थाह! धेरै तथापि, आटा को तयारी को लागि समस्या को डर, तर यो महिमा पर्खने तुलनामा केही छ।
प्रक्रिया आटा धेरै दिशामा विकास गर्न सक्नुहुन्छ। हामी कसरी तयार देखाउने खमीर आटा Pies र यसको भिन्न केही लागि। oparny र bezoparnym: शास्त्रीय पकाउने मा आटा तयार गर्न दुई मुख्य तरिकाहरू छन्। परीक्षण र आफ्नो नम्बर लागि घटक अलिकति फरक हुन सक्छ, तर Housewives को बहुमत मा, निम्न उत्पादन: पीठो चार कप, चीनी को चमचा को एक जोडी बारेमा बोसो ग्लास, एक वा दुई अन्डा, पानी वा दूध बारे एक कप burbles। बाट घिउ कसैले गर्न बिरूवा सुंगुरको बोसो प्रयोग - बोसो लगभग कुनै पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। कच्चा माल को यो रकम एक किलोग्राम ब्याच बारेमा प्राप्त छ देखि।
सीधा आटा। कच्चा माल तयार आटा सानना अघि। तरल (पानी वा दूध) जब तापमान ड्रप को बाँकी घटक संग संयुक्त कि विचार, 40 डिग्री गर्न गरम छ। खमीर unheated तरल पदार्थ को एक सानो राशि एक कचौरा अलग मा नस्ल, वा तिनीहरूले मर्न सक्छ। खमीर को गतिविधि वृद्धि गर्न, तिनीहरूले गर्न न्यानो पानी मा पूर्व-भंग र एक सानो चीनी थप्न सक्नुहुन्छ। नुन र चिनी पनि अलग एक चलनी मार्फत समाधान फिल्टर पछि नस्ल।
यसबाहेक, सबै समाधान मिश्रित र अन्डा थपिएका छन्। सबै केही मिनेट लागि पीठो र चलाउनु संग मिश्रित छ। Pies लागि खमीर आटा कुरकुरा बाहिर गरिएका गर्न, पग्लियो बोसो ब्याच को अन्त मा थपिएको छ। आटा हातमा र बर्तन, ब्याच स्टप पछि LAG सुरु भएपछि, व्यञ्जन एक ढक्कन ढाकिएको र न्यानो ठाउँमा राख्नु। आटा मात्रा दुगुना गरिनेछ, यो punched। किण्वन को अन्त आटा को मात्रा दुई गुणा अधिक बढेको छ भनी निर्धारण गरिन्छ, र यो एक सुखद गन्ध "परिपक्व" परीक्षण छ।
अब तपाईंलाई थाहा छ कि खमीर आटा कसरी तयार Pies bezoparnym तरिका लागि। जब आटा संग स्पन्जले विधि सबै सुरु - पीठो को कुटपिट र आधा आदर्श। यो प्रविधी पाक को जब एक ठूलो संख्या प्रयोग गरिन्छ। आटा पूर्ण किण्व | | खमीर गर्दा, यो सम्पूर्ण muffin (बोसो, अण्डा, नुन, चिनी, flavorings) र पीठो बाँकी थपिएको छ। आटा को सामान्य किण्वन मा अंतराल बिना समान रूप उठ्नेछ। प्रक्रिया लगभग दुई घन्टा लाग्छ। यो समयमा, आटा पटक एक जोडी obmyat गर्नुपर्छ।
तपाईं भरपर्दो र त्वरित किण्वन प्रक्रिया रूपमा, Pies लागि खमीर आटा बनाउन सक्छ। सारांश ढिलो प्रक्रिया आटा 10 डिग्री को एक तापमान एक तरल मा तयार छ कि हुन्छन्। आटा साँझ kneaded र एकै रातमा बाँकी। चिनी र तेल को बिहान 60 डिग्री गर्न गरम र पीठो संग उमालेर बनाउनु संग मिश्रण र त्यसपछि। खमीर को त्वरित किण्वन संग आदर्श विरुद्ध तीन पटक बढेको छ।
समाप्त आटा एक निश्चित आकार को टुक्रा मा अन्त उत्पादन आधारमा कटौती गरिएको छ। प्रत्येक टुक्रा बल मा अप रोल्ड र प्रमाणीकरण छाडियो। त्यसपछि बलमा को ढाला उत्पादनहरु (केक, cheesecakes, आदि), तल एक पाक पाना सिउनी राखिएका छन् जो। पाक अघि, प्रत्येक उत्पादन चम्कने दिन अण्डाको पहेंलो भाग संग गंदा छ। पाक समय उत्पादन र यसको मूल्य को प्रकार मा निर्भर गर्दछ।
Housewives को केही खमीर थप्न हिम्मत , आटा खट्टा क्रीम खमीर पर्याप्त एसिड प्रदान गर्दछ विचार। यो पक्कै पनि साँचो हो, तर खमीर खट्टा क्रीम संग आटा सोडा को वाहेक संग एक धेरै लोचदार र वायुमय दिन्छ। fillings संग केक लागि यस्तो आटा पूर्ण फिट। सायद यो पकाउने एउटा असामान्य दृष्टिकोण लामो सम्झना गर्दै र व्यञ्जनहरु पुस्ता देखि पुस्ता एक परिवार गोप्य रूपमा पारित गरिएको छ जो masterpieces, सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ छ। परीक्षण मिश्रित र fillings संग प्रयोग, र पाक को तापमान शासन संग! उत्कृष्ट परिणाम महाराज-जादूगर एक आभा सिर्जना गर्नेछ, र खराब चाँडै भूल हुनेछ।
रोटी निर्माता मा muffins खाना पकाउने
आटा संग Rhubarb पाइ। पत्र केक rhubarb संग भरी
व्यावहारिक कुक्री पाठ: multivarka मा risotto कसरी खाना पकाउनु
अन्डा संग चामल - उत्कृष्ट नास्ता
औषधि "काटाच्रोम" हो। प्रयोगको लागि निर्देशन
को खातिका के हो? विस्तृत विश्लेषण
कोरियाली छाला हेरविचार: चरणमा, समीक्षा, कस्मेटिक्स
शुरुआती लागि सुझाव: महिला बोले लागि कसरी बुनाई टोपी सुरु गर्न
जीवनी र ब्लक को काम
एक केटी संग कुराकानी कसरी सुरु गर्ने? सुझाव र चाल